Akwụkwọ niile nke Matilde Asensi | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
All Matilde Asensi akwụkwọ
Amụrụ na Alicante na June 12, 1962, Matilde Asensi bụ otu onye n’ime ndị Spen dere ede na narị afọ irina ihe karịrị nde 20 na-agụ akwụkwọ gburugburu ụwa. Onye edemede nke akwụkwọ akụkọ ihe mere eme na nke dị egwu nke ọganihu ya na mmalite 2000s, onye nta akụkọ a na onye edemede na-aga n'ihu na-adọrọ ndị na-agụ ya akụkọ ya. Anyị na-ewetara gị akwụkwọ niile ahụ Matilde Asensi dere ya mere, ọ bụrụ na i nwebeghị, ị nwere ike ịchọpụta nnukwu onye edemede a.
1 Amlọ Amber (1999)
3 Cat Ikpeazụ (2001)
4 Echefuola (2003)
6 Ihe niile n'okpuru igwe (2006)
7 Martin Silver Anya Trilogy
7.1 Ala guzosiri ike (2007)
7.2 Venbọ ọbọ na Seville (2010)
7.3 Nkata nke Cortés (2012)
8 Nloghachi nke pusi (2015)
Amlọ Amber (1999)
Oge izizi akwukwo Matilde Asensi biara na ulo akwukwo Plaza y Janés, n’agbanyeghi na Planeta weputara ya ozo n’afọ 2006. Otu ihe riri ahu nke riri onye ahu aka Otu Chess, ndị ndị otu ya na-achọ ihe osise "Amlọ Amber ahụ", otu n'ime akwụkwọ ndị tufuru n'oge ọrụ agha ndị agha Nazi mere na 1941 na mba Soviet. N'agbanyeghi na o ghaghi ihu nhu na akwukwo edemede ya, Asensi edebeghi nke abuo.
Ọ ga-amasị gị ịgụ Ime ụlọ amba?
Site ugbu a na Agha Worldwa Mbụ, Matilde Asensi mikpuru anyị na ngwụsị nke agha ntụdo, karịa nke ọma na mgbasa nke Order nke Templars na mbido narị afọ nke XIV. Ihe nkata ahụ malitere site na nloghachi na mpaghara Iberian Peninsula nke Galcerán de Bụrụ, monk nke Order of the Hospital, onye iro nke ndị Templars. Mgbe ọ hapụsịrị ịchọ akwụkwọ ụfọdụ ịsụgharị na nwa okorobịa nwere ihe ịtụnanya, Pope Clement dọrọ onye ahụ bụ isi aka na ntị ya bụ ọrụ nke ịchọpụta ogbu nke onye bu ya ụzọ, Pope Clement V na King Philip nke Anọ nke France. , onye nwụrụ mgbe e gbusịrị Nna-ukwu Ukwu nke ndị Templars.
Jiri oge laghachi azụIacobus nke Matilde Asensi dere.
Cat Ikpeazụ (2001)
Mbọ na ire nke nde 1.25, otu n'ime akwụkwọ ndị kasị nwee ihe ịga nke ọma site na Matilde Asensi ọ ka na-abụ akara maka ndị hụrụ akwụkwọ akụkọ ọhụụ. Onye malitere akwụkwọ akụkọ a bụ Ottavia Salina, onye sista na-achọpụta mkpụrụ edemede Grik asaa na obe asaa a kara akara na ozu nwa agbọghọ Etiopia. N'akụkụ ya, ọ hụrụ mpempe osisi nke na mbụ obere mere ka ọ chee na ha metụtara Vera Cruz, bụ ndị a na-ezuru iberibe ya gburugburu ụwa. N'ime akwụkwọ Matilde Asensi niile, nke a bụ otu ọkacha mmasị anyị.
Yougụbeghị Nwamba ikpeazu?
Omume mara mma ma setịpụrụ n'oge anyị, Nke furu efu, njikọ gara aga na ugbu a site na a Adventure akwụkwọ naanị. Onye na-ede akwụkwọ akụkọ ahụ bụ Arnau, onye na-agba ọsọ site na Barcelona nke nwanne ya nwoke na-arịa Cotard's syndrome (ma ọ bụ ọrịa ịgọnahụ). Mgbe o nyochachara nyocha nwanne ya nwoke banyere mmalite nke okpukperechi Yatiris na asụsụ Aymara (oke mmụọ nke na ọ nwere ike ịkọwa asụsụ kọmputa), Arnao tụpụtara ị ga Bolivia iji chọpụta mmalite nke ọbụbụ ọnụ nke nwere ike ịkpata ọrịa nwanne ya.
Site na anya nnupụisi Jonás, nwa onye agha Galcerán de Born, anyị maara a Santizọ Santiago juputara n'omume nke onye na-eto eto bu n'obi imezu ya na Templar oge ochie mgbe o kwere nkwa ndi agha ndi agha. N'ime akwụkwọ niile Matilde Asensi dere, njem njem Ọ bụ, karịa akụkọ dịka, ngọpụ zuru oke iji nyochaa obodo na omenala nke gburugburu ebe obibi dịka nke Jaczọ Jacobean n'oge narị afọ nke XNUMX.
Ihe niile n'okpuru igwe (2006)
Asensi na-eme ka anyị gaa China ahụ jupụtara na nzuzo na akụ zoro ezo gosipụtara na map nke epic All n'okpuru igwe. Akụkọ malitere site na nchọpụta nke onye ọhụụ, Ana, onye nkuzi Spanish na Paris, ọnwụ di ya na Shanghai. Mgbe ị rutere mba Eshia, nwa agbọghọ ahụ ga-achọpụta na mgbe ọ nwụsịrị, ịchọta akụ nke Emperor nke Mbụ nwere ike zoo, nke ili ya dị na obodo Xián. Ihe njem megide elekere nke tinyekwara mkpagbu site na mafia nke na-akpọ onwe ya Green Band na ndị ọnaozi nke ala.
Martin Silver Anya Trilogy
Ala guzosiri ike (2007)
N'ime akwukwo akwukwo ya nile, Matilde Asensi ekwuola ihe omimi banyere akuko Amazon, China ma obu Europe mgbe ochie, ma o ka nwere ihe ichoro: njem America n'oge narị afọ nke iri na asaa. N'ịbụ onye a maara dị ka okpukpu atọ nke Martín Ojo de Plata, ma ọ bụ nnukwu Spanish Age Saga, Tierra Firme ghọrọ mpịakọta mbụ nke ihe ịma aka ọhụrụ maka onye edemede. Enwere akụkọ banyere otu nwanyị, Catalina Solís, onye ga-enwerịrị àgwà nke nwanne ya nwoke Martín, nke ụfọdụ ndị na-apụnara mmadụ ụra na Bekee gburu n'oge njem gaa New World. Mgbe ọ nọsịrị afọ abụọ n'àgwàetiti nke ọzara, Catalina ghọrọ Martín Ojo de Plata, otu n'ime ndị na-agba mbọ na-agba akwụna na Caribbean.
Ọ ga-amasị gị ịgụ Chile?
Venbọ ọbọ na Seville (2010)
Mgbe ihe egwu nke Tierra firme, Catalina Solís laghachiri na Spen na 1607, karịchaa n'obodo Seville, ebe ọ tụrụ aro igbu Curvo, ezinụlọ dị mkpa nke ndị ahịa si New World. Akwụkwọ nke na-agba ama dị ukwuu nke oge dịka ọ jọgburu onwe ya ma maa mma dị ka Ọchịchị Ọchịchị Spanish.
Choputa Imegwara na Seville.
Nkata nke Cortés (2012)
Imebi Curvo na-abụ ebumnobi Catalina Solís iji kpughee ezinụlọ ndị ahịa, oge a site na Newwa Ọhụrụ. Isi akụkọ dị na map akụ akụ Hernán Cortés, nke Curvos chọrọ ịkwatu eze Spain. Otu epic na-agwụcha aka maka njem siri ike nke Asensi na-atụ aro ka anyị nwee naanị ụzọ atọ ọ bụla.
Complete Isabel Allende nke Spanish Golden Age saga na Na izu ọjọọ nke Cortés.
Nloghachi nke pusi (2015)
The ikpeazụ Caton kwesịrị akụkụ nke abụọ nke were afọ iri na anọ rute, bụrụkwa nnukwu ihe ịga nke ọma. Ọzọkwa, Ottavia Salina, tinyere Farag Boswell, onye ọkọ akụkọ ihe mere eme nke Greco-Roman Museum nke Alexandria onye anyị zutere na akwụkwọ mbụ, wepụtara iji dozie ihe omimi dị iche iche nke malitere na otu narị afọ mbụ, otu oge. Kzọ silk.
Ka adịghị Nlaghachi nke catón?
Kedu ihe ị chere banyere ndị a 8 nnukwu akụkọ ihe mere eme?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » All Matilde Asensi akwụkwọ
"Towerlọ Elu Ọchịchịrị." Egwu, akụkọ sayensị na akụkọ ifo nke ọdịda anyanwụ site n'aka Stephen King.
Anọghị Philip Kerr. Bernie Gunther nwụrụ nna ya.